Ra’iisul wasaaraha Xukumada Faderaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goordhaw Gaaray Magaalada Xudur ee Xurunta Gobolka Bakool.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka ambaxay Magaalada Baydhabo ee Caasimada KMG ah Koofur Galbeed ayaa gaaray Xudur waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Koofur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen, Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Dowlada Faderaalka Soomaaliya iyo Boqolaal shacab ah.
Ra’iisul wasaare Khayre oo boqolaal shacabka reer Xudur la hadlay ayaa ugu mahad celiyay soo dhaweynta diiran oo ay u sameeyeen ayaa ku amaanay in ay deegaanadooda ka dhigteen ku dhul nadboon sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu sheegay in maal maha Soo socda uu ku sugnaadoono Xudur si uu u dhagaysto baahiyaha ay qabaan shacabka degmada Xudur ee Gobolka Bakool iyo deegaanada Hoos taga.
Shacabka ku soo dhaweeyay garoonka Kubada Cagta ayuu u balan qaaday in uu u dhisayo garoonka kubada Cagta, isla markaana uu lacagta ku wareejinayo Maamulka Koofur Galbeed.
Amaanka Magaalada Xudur ee Xarunta Gobolka Bokool ayaa aad loo adkeeyay waxaanada wadooyinka Magaalada lagu arkayaa Ciidamo wadooyinka ku sugan.
Ra’iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa maalmaha Soo aadan ku sugnaa doona Magaaladda Xudur waxa ayna kulamo la qaadan doonaan Madaxda Maamulka Koofur Galbeed, Waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada Xudur.